बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? यसरी सुधार्नुस् ! – Everest Dainik – News from Nepal
बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? यसरी सुधार्नुस् !
काठमाडौं । केही मानिस बस्दाखेरी अनायासै गोडो हल्लाइरहेका हुन्छन् । धेरैजनाले यो बानी मात्र भएको ठानेर बेवास्ता गर्छन् । तर यो रेस्टलेस सिन्ड्रोमको लक्षण हो । के हो यो सिन्ड्रोम र यसबाट कसरी छुटकारा पाउने रु चर्चा गरौं ।
अत्यधिक रक्सी सेवन, रुघा र एलर्जीको औषधि खाँदा पनि यो सिन्ड्रोमको सम्भावना बढ्छ । यो बानी र रोगबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईंको जीवनशैली राम्रो हुन्छ र त्यसबाहेक तपाईंले केही अन्य कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
नियमित मालिश गर्दा पनि रेस्टलेस लेग सिन्ड्रोमबाट राहत पाइन्छ । हप्तामा दुईचोटि ४५ मिनेट गोडाको मसाज गर्दा निद्रा राम्रो आउँछ र गोडा स्वस्थ रहन्छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: Khutta hallaune